I-Chemical Equation Balancer
Database of 10000 chemical reaction - chemistry tools - imininingwane yolwazi
Ufuna ukusesha izibalo ungaxhunywanga, zama uhlelo lwethu lokusebenza lweselula
Sesha ku-Android noma ku-Iphone App Store yakho ngohlelo lokusebenza lweChemical Equation Balancer ngale logo
Izincazelo eziyisisekelo ku-Chemistry
Kuyini ukulingana kwamakhemikhali?
I-Chemical Equation iyindlela yokuchaza ukusabela kwamakhemikhali lapho igama lento ngayinye yamakhemikhali izothathelwa indawo uphawu lwayo lwamakhemikhali.
Ku-Chemical Equation, inkomba yomcibisholo imele ukuqondiswa lapho kwenzeka khona impendulo. Ngokusabela ngendlela eyodwa, sizokhombisa ngomcibisholo kusuka kwesobunxele kuye kwesokudla. Ngakho-ke izinto ezingakwesobunxele zizobandakanyeka, kuthi lowo ongakwesokudla abe ngumkhiqizo.
Incazelo Elinganisiwe Yokulinganisa
I-equation elinganiselayo i-chemical reaction equation lapho inani eliphelele nenani lama-athomu entweni ngayinye ekuphenduleni kufana kuzo zombili izinto ezisabela kanye nezakhi. Ngamanye amagama, ubukhulu nokushaja ezinhlangothini zombili zokuphendula kuyalingana.
Izibonelo Zokulinganisa Okungalingani Nokulinganisela
Ama-reactants nemikhiqizo yokusabela kwamakhemikhali ibhalwe ku-equation yamakhemikhali engalingani, kepha amanani adingekayo ukufeza ukongiwa kwesisindo awacacisiwe. Lesi sibalo, ngokwesibonelo, asilinganisiwe ngokwesisindo sokuphendula phakathi kwe-iron oxide nekhabhoni ukwakha i-iron ne-carbon dioxide:
Njengoba kungekho ions ezinhlangothini zombili ze-equation, inkokhiso ilinganisiwe (imali engathathi hlangothi iyonke).
Engxenyeni ye-reactants ye-equation (ngakwesokunxele komcibisholo), kukhona ama-athomu amabili wensimbi, kodwa eyodwa kuphela ohlangothini lwemikhiqizo (kwesokudla komcibisholo). Ungasho ukuthi i-equation ayilinganisiwe yize ungazibali ezinye izinombolo zama-athomu.
Kuzo zombili izinhlangothi ezingakwesokunxele nangakwesokudla zomcibisholo, inhloso yokulinganisa i-equation ukuthola inombolo efanayo yohlobo ngalunye lwe-athomu. Lokhu kufezwa ngokuguqula ama-coefficients ahlanganisiwe (izinombolo ezibekwe phambi kwamafomula ahlanganisiwe). Imibhalo (izinombolo ezincane ezingakwesokudla kwama-athomu athile, njenge-iron ne-oxygen kulokhu) azikaze zishintshwe.
I-equation elinganisiwe yile:
Iyini into ekhemistry?
Qaphela, konke okubonakalayo, kufaka phakathi imizimba yethu uqobo, kuyizinto. Kukhona izinto zemvelo ezifana nezilwane, izitshalo, imifula, inhlabathi ... yizinto zokufakelwa.
Izinto zemvelo zinezinto eziningi ezahlukahlukene. Futhi izinto zokufakelwa zenziwa ngezinto zokwakha. Yonke into iyinto noma ingxube yezinto ezithile. Isibonelo: i-Aluminium, amapulasitiki, ingilazi, ...
Ziyini izakhiwo zabo?
Into ngayinye inezici ezithile: isimo noma ifomu (okuqinile, uketshezi, igesi) umbala, iphunga nokunambitheka. Ukubalwa noma okungancibiliki emanzini ... Iphuzu lokuncibilika, indawo yokubilisa, amandla adonsela phansi, ukuqhutshwa kukagesi, njll.
Futhi ikhono lokuguqula libe ezinye izinto, ngokwesibonelo, amandla okubola, ukugijima ... yizici zamakhemikhali.
Zonke izinto zakhiwa izinhlayiya ezincane kakhulu, ezingathathi hlangothi kagesi ezibizwa ngama-athomu. Kukhona amashumi ezigidi zezinto ezahlukahlukene, kepha kunezinhlobo ezingaphezu kwama-100 kuphela zama-athomu.
I-athomu iqukethe i-nucleus ekhokhiswe kahle negobolondo elenziwe nge-elektroni elilodwa noma amaningi akhokhiswe kabi
Isibalo esithandwa kakhulu
Eyaziwa nangokuthi ukusabela kokuqala. Olunye uhlobo lokuphendula okuhlanganayo okwenzeka njalo ukuphendula kwento ene-oxygen yokwakha i-oxide. Ngaphansi kwezimo ezithile, izinsimbi nezinsimbi ezingekho emthethweni zombili zisabela kalula nge-oxygen. Uma seyikhanyisiwe, i-magnesium iphendula ngokushesha nangendlela emangalisayo, isabela nge-oxygen evela emoyeni ukudala i-magnesium oxide powder enhle.
H2 + I2 => 2HI Usayizi + O2 => 2MgO H2SO4 + NH3 => NH4HSO4 Cl2 + Yiba => BeCl2 CH3CH = CHCH3 + H2O => C4H10O Cl2 + Mg => MgCl2 C2H4 + H2O => C2H5OH Buka konke ukusabela kokuhlanganiswa
Ukuphendula okuningi kokubola kubandakanya ukushisa, ukukhanya, noma ugesi ukufaka amandla. Amakhemikhali kanambambili yizakhi eziqukethe izinto ezimbili kuphela. Uhlobo olulula kakhulu lokuphendula ekuqobekeni kulapho inhlanganisela kanambambili yehlela ezintweni zayo. IMercury (II) oxide, okuqinile okubomvu, iyawohloka yenze igesi le-mercury ne-oxygen uma lishiswa. Futhi, ukusabela kuthathwa njengokuphendula kokubola noma ngabe umkhiqizo owodwa noma eminingi kusese kuyinkimbinkimbi. I-carbonate yensimbi iyahlehla ukuze yakhe i-oxide yensimbi negesi yesikhutha. I-calcium carbonate ngokwesibonelo ibola ibe yi-calcium oxide ne-carbon dioxide.
MgCO3 => MgO + CO2 C2H5Cl => C2H4 + I-HCl I-2Fe (OH)3 => Fe2O3 + 3H2O (NH4)2SO4 => H2SO4 + 2NH3 C4H10 => CH3CH = CHCH3 + H2 2HCl => Cl2 + H2 2NaHCO3 => H2O + Na2CO3 + CO2 Buka konke ukusabela kokubola
Ukusabela okwehlisa oksijini
Ukuphendula kwe-oxidation-reduction (redox) uhlobo lokuphendula kwamakhemikhali okubandakanya ukudluliswa kwama-electron phakathi kwezinhlobo ezimbili. Ukuphendula okwehlisa i-oxidation yinoma ikuphi ukusabela kwamakhemikhali lapho inani le-oxidation le-molecule, i-athomu, noma i-ion liguquka ngokuthola noma ngokulahlekelwa i-electron. Ukuphendula kwe-Redox kujwayelekile futhi kubalulekile kweminye imisebenzi eyisisekelo yokuphila, kufaka phakathi i-photosynthesis, ukuphefumula, amandla omlilo, nokugqwala noma ukugqwala.
I-3Ca (ClO)2 => 2CaCl2 + I-Ca (ClO3)2 C6H6 + Cl2 => C6H5Cl + I-HCl 10F2 + 2Sb2O3 => 3O2 + 4SbF5 C2H5OH + H2SO4 + K2Cr2O7 => CH3CHO + H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 Cl2 + 2NaBr => Br2 + 2NaCl 3x - 2yO2 + 4FexOy => 2xFe2O3 2H2O + O2 + I-4Fe (OH)2 => 4Fe (OH)3 Buka konke ukusabela okwehlisa oksijini
I-A + BC → AC + B Element A iyinsimbi kulokhu kuphendula okujwayelekile futhi ingena esikhundleni se-element B, insimbi esakhiweni futhi. Uma into yokufaka esikhundleni ingeyona eyensimbi, kufanele ithathe isikhundla sokunye okungeyona insimbi kukhompiyutha, bese iba ukulingana okujwayelekile. Izinsimbi eziningi zisabela kalula ngama-acid, kanti omunye wemikhiqizo yokuphendula lapho enza kanjalo igesi ye-hydrogen. I-Zinc iphendula i-aqueous zinc chloride ne-hydrogen ene-hydrochloride acid (bona isithombe esingezansi).
Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr C6H5Cl + I-KOH => C6H5OH + I-KCl NH3 + (CH3CO)2O => CH3COOH + CH3I-CONH2 Mg + I-FeSO4 => Fe + MgSO4 I-3Ca + 2H3PO4 => Ca3(PO4)2 + 3H2 Fe + I-CuSO4 => Cu + I-FeSO4 C2H5OH + HBr => H2O + C2H5Br Buka konke ukusabela kokufaka esikhundleni okukodwa
Ukusabela okuphindwe kabili
I-AB + CD → AD + i-CB A no-C zingama-cations akhokhiswayo akhokhisayo kulokhu kuphendula, kuyilapho u-B no-D bengama-anion akhokhiswa kabi. Ukuphendula okuphindwe kabili kwenzeka kakhulu kusixazululo esinamandla phakathi kwamakhemikhali. Ukubangela ukusabela, omunye wemikhiqizo uvame ukuba yisisu esiqinile, igesi, noma inhlanganisela yamangqamuzana njengamanzi. Amafomu aqhamukayo ekuphenduleni okuphindaphinda kabili lapho ama-cations avela kwesinye isisetshenziswa esihlanganisa ukwakha i-ionic compound ne-anion evela kwenye i-reactant. Ukusabela okulandelayo kwenzeka lapho kuhlanganiswa izixazululo ezinamandla ze-potassium iodide ne-lead (II) nitrate.
3H2O + Na3Njengo => H2O + 3NaOH H2S + I-CsOH => H2O + Cs2S FeBr3 + I-3Ag (NO3=> 3AgBr + Imali (NO3)3 H2SO4 + I-NaCl => HCl + NaHSO4 2AgNO3 + Na2SO4 => 2NaNO3 + Ag2SO4 2NH3 + CO2 => (NH2)2CO + H2O Na2SO4 + Pb (CHA3)2 => 2NaNO3 + I-PbSO4 Buka konke ukusabela okuphindisela kabili
Buka Iwebhusayithi Yethu Ye-Chemical Equation Dictionaru Ngolimi Oluhlukile
Isi-Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Isi-Bulgarian (речник на химичните уравнения) IsiShayina (Esenziwe Lula) (化学 方程式 字典) IsiShayina (Esijwayelekile) (化學 方程式 字典) IsiCroatia (rječnik kemijskih jednadžbi) IsiCzech (slovník chemických rovnic) Isi-Danish (kemisk ligningsordbog) IsiDashi (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Isi-Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) IsiFulentshi (dictionnaire d'équations chimiques) IsiJalimane (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Isi-Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Isi-Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) IsiNtaliyane (dizionario delle equazioni chimiche) Isi-Japanese (化学 反 応 式 辞書) Isi-Korean (화학 방정식 사전) Isi-Norwegian (kjemisk ligningsordbok) IsiPolish (Słownik równań chemicznych) IsiPutukezi (dicionário de equação química) Isi-Romanian (dicționar de ecuații chimice)
Isi-Russian (словарь химических уравнений) Isi-Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Isi-Swedish (kemisk ekvationsordbok) Isi-Catalan (diccionari d'equacions químiques) Isi-Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Isi-Hebrew (מילון משוואה כימית) Isi-Indonesian (kamus persamaan kimia) Isi-Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Isi-Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) IsiSerbia (речник хемијских једначина) Isi-Slovak (slovník chemických rovníc) Isi-Slovenian (slovar kemijske enačbe) Isi-Ukrainian (словник хімічних рівнянь) I-Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Isi-Estonia (keemiliste võrrandite sõnastik) Isi-Galician (dicionario de ecuacións químicas) IsiHungary (kémiai egyenlet szótár) Isi-Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Isi-Thai (พจนานุกรม สมการเคมี) I-Turkish (kimyasal denklem sözlüğü)
Isi-Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) IsiBhunu (chemiese vergelyking woordeboek) Isi-Malay (kamus persamaan kimia) IsiSwahili (kamusi ya equation yahlukile) I-Irish (i-foclóir cothromóid cheimiceach) Isi-Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Isi-Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Isi-Icelandic (efnajöfnuorðabók) Isi-Macedonian (речник за хемиска равенка) Isi-Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבבך) I-Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Isi-Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Isi-Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Isi-Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) IsiCreole SaseHaiti (diksyonè ekwasyon chimik) Isi-Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Isi-Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Isi-Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) I-Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Isi-Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Isi-Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Isi-Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Isi-Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Isi-Igbo (isichazamazwi samakhemikhali ọkọwa okwu) I-Javanese (kamus persamaan kimia) Isi-Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Isi-Khmer (វចនានុក្រម សមីការ គីមី) Isi-Lao (ວັດ ຈະ ນາ ນຸ ກົມ ສົມ ຜົນ ທາງ ເຄ ມີ) IsiLatin (isichazamazwi se-equation eget) Isi-Maori (papakupu whārite matū) Isi-Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Isi-Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Isi-Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Isi-Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) ISomalia (qaamuuska isle'eg kiimikada) IsiTamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Isi-Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Isi-Yoruba (iwe itumọ idogba inzuzo) IsiZulu (isichazamazwi se-chemical equation) I-Myanmar (Burmese) (ဓာတု ညီမျှခြင်း အဘိဓါန်) I-Chichewa (isakhiwo equation dikishonale) Isi-Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Isi-Malagasy (rakibolana fitoviana simika) IsiMalayalam (rakibolana fitoviana simika) Isi-Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) IsiSuthu (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) ISudanese (kamus persamaan kimia) Isi-Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Isi-Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Isi-Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Isi-Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) I-Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Isi-Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) I-Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Isi-Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Isi-Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Isi-Samoa (vailaʻau faʻasino igoa) IScottish Gaelic (i-faclair co-aontar ceimigeach) IsiShona (kemikari equation duramazwi) Isi-Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Isi-Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) IsiXhosa (imichiza equation dictionary)
insizakalo yokubhala eseyi esezingeni eliphakeme e-UK